FAQs - Goldpro New Material Co., Ltd.
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana ireo rehefa 1) nahazo ny famandrihana nataonao ianao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao ianao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Phone: + 86-310-8746025
Address: Faritry ny indostrian'ny faritanin'i Guangping County Handan City Hebei
afaka mifandray aminay heer ianao